सांगितिक यात्रामा केशव - Rajmarg Online
सांगितिक यात्रामा केशव
हुने विरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै सानैदेखी गित गाउन थाल्नुभएका केशवसिंह ठकुरीले एउटा गायक बन्ने सपना बोक्नु भएको छ । घोराहीको द किंग लंगमा अहिले लाईभ म्युजिसिएनको रुपमा काम गर्दै आउनु भएका केशवसिंह ठकुरीसँग हामीले आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ ……
संगीतकार तथा गायकार
प्र्रस्तुति : चन्द्रप्रकाश नेपाली
स्वागत छ यहाँलाई
तपाईले गित गाउन कहिलेदेखी सुरु गर्नु भयो ?
मैले आफू ७ वर्षको हुदादेखी गित गाउन सुरु गरेको थिए । सुरुमा मैले आधुनिक गितहरु मात्रै गाउने गर्दथे । तर पछिल्लो समय विस्तारै आधुनिकसँगै मैले पप गितहरु गाउन थाले । अहिले त पपसंगै रफ, म्यालोडे, हिन्दी लगाएतका गितहरु गाउँदै आएको छु ।
तपाईको सांगितिक क्षेत्रको अनुभव कस्तो छ ?
सांगितिक क्षेत्रमा पनि धेरै कुरा भोग्नु पर्ने रैछ । अवसर र चुनौति दुबै हुदो रैछ । रेकर्डिङ र लाइभ म्युजिकमा गाउनेको भोगाई फरक हुदो रैछ । हामी लाईभ म्युजिक गर्नेहरुलाई त्यत्ति सहज छैन् । नेपालकै अन्य जिल्लाको तुलनामा लाईभ म्युसिएनहरु, आर्टिसहरुको महत्वलाई दाङमा अझै राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन् ।
त्यसैले आर्थिक रुपमा पनि हामीले एक खालको समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था छ । हिजोको तुलनामा लाईभ म्युजिकप्रतिको आक्रषण बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा भोलीको दिनमा आर्थिक रुपमा यसले राम्रै सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।
गित रेकर्डिङको तयारी के छ ?
एउटा गायक बनेर आफूलाई चिनाउने सपना मेरो छ । मैले कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोमा गाएर गित रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर धेरै लामो समय देखी सोच्दै आएको छु । मेरो गित पनि मान्छेहरुले सुनोस् । रेडियोबाट बजोस् भन्ने चाहना छ । मैले आफ्नोतर्फबाट तयारी थालिरहेको छु । अव छिट्टै गित बजारमा ल्याउने सोचमा छु ।
कस्तो खालको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
अहिले म गितको लागी शब्दको खोजीमा छु । सबैले रुचाउने राम्रो खालको शब्द जुन शब्द सुन्दा प्रत्येकले आनन्दको महशुस गर्न सकुन् । त्यस्तो खालको शब्दको खोजीमा छु ।
एउटा राम्रो गायक हुनको लागी के कस्ता गुण आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
मैले देखेको जुन सुकै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न अनुशासन नै आवश्यक छ । अनुशासन भएमा मात्रै सबै क्षेत्रमा सफल बन्न सकिन्छ । त्यस्तै सांगितिक क्षेत्रमा पनि अनुशासन र संयम्ताको निकै ठुलो महत्व रहेको छ ।
अर्काे महत्वपुर्ण कुरा गित गाउदा एक्सट्रा टेक्निकहरु लगाउन सक्नुपर्छ । आफ्नो आवाज कस्तो छ, त्यसलाई महशुस गरेर सुधार्दै लैजानु पर्छ । खानपिनका कुराहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
संगित सम्वन्धि ज्ञानका कक्षाहरु लिनु भयो कि नाई ?
मैले धेरै पहिले केही समय सम्म सांगितिक ज्ञानका लागी कक्षा पनि लिए । त्यतिबेला मलाई गित गाउन आए पनि गितार बजाउन चाहि आउदैन थियो । मैले आज भन्दा ७,८ वर्ष अगाडी गितार पनि बजाउन सिके ।
साथै गितार र संगित सम्वन्धि ज्ञान लिनका लागी धेरै कितावहरु पढे । अनलाईनबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर पाए । काठमान्डु, पोखरालागएत ठाउँका साथिहरुसँग पनि धेरै ज्ञान लिन पाए । क्लासिक गितहरुमा मेरो आवाज अलि बढि दौडिन खोज्छ ।
लाईभ म्यूजिसिएन भएर काम गरिरहदा खेरी तपाईलाई अरुले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
मान्छेको बुझ्ने तरिका फरक हुन्छ । मैले अघि पनि भने अन्य ठाउँको तुलनामा दाङमा अझै लाईभ म्यूजिसिएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुर्णरुपमा सकारात्मक हुन सकेको छैन् । कुनै मेला महोत्सवमा वा लाईभ म्युजिकमा हामीले गित गाएर स्टेजबाट तल झर्दा कुनै ठाउँ राम्रो सम्मानजनक र उत्साहजनक कुराहरु सुन्न पाईन्छ ।
कतिपयको मनमा चाही उसलाई दबाउन पाए हुन्थ्यो है भन्ने खालका सोचाई पनि हुन्छन् । थोरै मात्रमा मध्यम प्रतिक्रिया पनि सुन्न पाईन्छ ।
तपाईको अवको आफ्नो योजना र सोचाई के छ ?
अहिले जुन लाईभ म्युजिक गरिरहेको छु । यसलाई पनि नछोड्ने र यसको साथसाथै अन्य प्रोग्रामहरु पनि गर्दै जाने मेरो सोचाई छ ।
तपाईको विचारमा संगित भनेको के हो ?
गित संगित भनेको मनलाई बुझ्ने एउटा भाव हो । दुःख अनि सुखको साथि भनेको नै गित संगित हो ।
प्रेमलाई चाहि कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा प्रेम भनेको हामीले जुन शब्दमार्फत् व्यक्त गर्छौ । जुन प्रेम, एउटा प्रेमीले एउटा प्रेमीकालाई गर्न सक्छ । आमाले छोरालाई, दाजुभाईले दिदि बहिनीलाई, हरेकसँग प्रेम हुन्छ ।
अन्त्यमा मैले नसोधेको र तपाईलाई भन्न मन लागेको केही छ भने ?
सांगितिक यात्रामा निरन्तर लागीरहेको छु । सधै सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र भोलीको दिनमा राम्रो प्रगति गरेर देखाउन सकु यही चाहान्छु ।
यो समय र विचारका लागी धन्यवाद
मलाई मेरो सांगितिक अनुभवहरु सुनाउने यो अवसर दिनुभएकोमा राजमार्ग अनलाईन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
Posted in फिचर, मनोरञ्जन, र्वार्ता, विचार
Prevबेलझुण्डी कोरोना अस्पतालमा ६ सय बढीले लिए उपचार सेवा
Nextकोरियामा औद्योगिक दुर्घटनामा परि एक नेपालीको मृत्‍यु